China eyebrow ipensile makeup yabucala ileyibheli elide vegan ishiya ipensile ipeni micro mveliso kunye nabathengisi | Ubuhle beIris
Ipensile yamashiya ipeyinti yabucala ehlala ihleli vegan ishiya ipensile ipeni encinci
Isilumkiso esine-ultra-fine tip esine-eyebrow ipensile, egudileyo kunye ne-silky. Ipensile yamashiya itsala iinwele ezincinci zebrow. Ichaza ngokuchanekileyo ubume bemehlo lamehlo.
Yakha iibrawuza ezipheleleyo ezintle ngepensile yethu encinci ye-eyebrow encinci. Ipensile ebrawuza encinci ichanekile, inxiba kwaneenwele ezigqwesileyo ezinombala wokugqiba kwendalo.
Yenza ibrawuza echazwe ngakumbi ngokuzalisa indawo encinci, incam enesikhumba esitsala ngokutsala imigca emihle, ekuvumela ukuba wenze inkangeleko yeenwele zebhokhwe zendalo!
Iingqameko zakho azisoze zibonakale zingcono emva kokuba uzigcwalisile ngale nto inencasa, inombala omkhulu onombala Ipensile yamashiya!
Igama lomxholo Ipensile yamashiya
3. Smooth kwaye kulula ukuyisebenzisa
4. Ukuhlala ixesha elide nokungangeni manzi
Egqithileyo I-vegan highlighter ileyibheli yabucala yokwenza i-oqaq yokuqaqambisa inkangeleko yabucala ye-oem yokuqaqambisa iphalethi
Ipensile yamashiya ipeyinti yabucala
Iipensile zabucala zepensile
Ipensile yamashiya ipeyinti yangasese yangokwezifiso
Ipensile yamashiya ayinamanzi
ileyibheli yabucala ipensile
Ipensile encinci yeepeni zabucala